Xildhibaan Fiqi: Canshuurta dadka lagu dilo haddeysan bixin maxaa loogu qabtaa marka ay bixiyaan? – Kalfadhi
Xildhibaan Fiqi: Canshuurta dadka lagu dilo haddeysan bixin maxaa loogu qabtaa marka ay bixiyaan?
Xildhibaan Axmed Macali Fiqi ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir looga baahan yahay inuu cadeeyo waxa uu ku qabto canshuurta laga qaadao dadka gobolkiisa ku nool. Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in dadka gobolka marka ay canshuurta bixin waayaan lagu dilo aysan macquul ahayn in xisaab-celinteeda la waayo, sida uu hadalka u dhigay.
“Guddoomiyaha Gobolka Banaadir waxaa laga rabaa canshuurta dadka Muqdisho lagu dilo, marka ay bixin waayaan, midda la bixiyana wax lagu qabto aysan muuqan, in uu caddeeyo xisaab-celinteeda’ ayuu Xildhibaan Fiqi ku yiri dhigaal uu ku soo qoray Feysbuuggiisa.
Xildhibaanku waxa uu dhigaalkan ku soo lifaaqay warqaddii uu Xafiiska Hanti-dhawraha Guud ee Qaranka ku hakiyey dhaq-dhaqaaqii lacag kala bixidda xisaabaadka bangi ee uu Maamulka Banaadir ku lahaa bangiyada gaarka loo leeyahay.
“Dadka Muqdisho la isuguma dari karo canshuur aan waxba lagu qabanayn iyo xisaab-celin la’aan” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. Laakiin, Xafiiska Hanti-dhawaraha Guud ee Qaranka waxa uu sheegay in amarka uu soo rigay shalay, oo isla shalay dhaqan-gelayey, uusan saameyneyn hanaanka dakhli ku uruurinta xisaabaadka bangi ee Maamulka Gobolka Banaadir.
Golaha Shacabka oo kulankii ka baaqday Sabtidii maanta yeelanaya
Xubnaha Aqalka sare ee ku sugan Puntland oo wada-tashiyadoodii ku bilaabay arrinta khilaafka imtixaanaadka